Mourinho oo u jawaabay Lampard… wuxuuna ammaanay maskaxda kooxda Tottenham – Gool FM
(London) 30 Nof 2020. Tababaraha kooxda Tottenham Hotspur ee Jose Mourinho ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id, si uu kaga hadlo kulankii ay xalay barbaraha la galeen kooxda Chelsea.
Kooxaha Chelsea iyo Tottenham Hotspur ayaa barbardhac 0-0 ku kala baxay, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Stamford Bridge, kaasoo qeyb ka ahaa horyaalka Premier League ee dalka England.
Tottenham Hotspur ayaa wali hoggaamineysa dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League iyada oo leh 21 dhibcood, Liverpool ayeyna farqi goolal ah kaga hooggaamineysaa, halka Chelsea ay fadhiso booska saddexaad iyadoo leh 19 dhibcood.
Haddaba Jose Mourinho ayaa ciyaarta kaddib sheegay:
“Ciyaartoyda qolka labiska kuma faraxsana natiijadan, tanina waa waxa ugu fiican ee laga baran karo ciyaarta, ma faraxsani, tanina aniga wey igu weyn tahay, sababatoo ah waxa ay taasi ka dhigan tahay in maskaxda ciyaartoyda ay isku bedeshay sida ugu fiican.”
“Waxa aan ka qaatay kulanka ayaa ah barbaro halkan ka dhaca inta badan waa natiijo wax ku ool ah, iyo inaan sii joogo hogaanka Premier League, natiijadan sidoo kale waa mid wanaagsan, laakiin qolka labiska ee kooxdeena kuma faraxsana.”
Tababaraha reer Portugal ayaa ka hadlay hadalkii Frank Lampard ee ahaa in Tottenham Hotspur aanu sameynin fursado inta ciyaarta ay socotay, wuxuuna yiri:
“Ma aanan helin fursado nagu filan, laakiin imisa fursadood ayay kooxdiisu heshay caawa? Waa inuu ka jawaabaa su’aashaas.”
“Chelsea waligeed qatar ma gelin, hadii ay qatar gashayna, waxaan diyaar u nahay inaan ciqaabno, laakiin waxaan ku celinayaa hadalkii aan iri, waxa caawa iga farxinaya ayaa ah in maskaxda ciyaartoyda ay isbadashay, anaga kuma faraxsani barbaraha 0-0 ah ee halkan.”
“Ma aanan arkin fursado badan oo ciyaarta ah, koox walba waxay isku dayday inay guuleysato, waan is ixtiraamnaa, ma jirto cid Qatar gashay, midkeen iskuma dayin inuu badelo qaabka ciyaarta, dhinac walba wuxuu ku fikirayay maskax isku mid ah, haddii aan sameyn lahaa hal qalad waan guuldarreysan lahaa.”